China Sirivha yakaputirwa spandex inoitisa / inodzivirira machira vagadziri uye vanotengesa | 3L Magwaro
Sirivha yakachena yakavharwa polyamide spandex machira
Iyo yakanakisa yekudzivirira inodzivirira machira ane antibacterial mashandiro, sirivheri yakaputirwa pane polyamide / nylon spandex base zvinhu, yakanyanya kupfeka inodzivirira, inotambanuka, yakapfava uye yakasununguka. Icho chigadzirwa chepamusoro-soro chinowanikwa nekusunga zvachose sirivheri kuchinhu cheyiloni kuburikidza nehunyanzvi hwemberi nzira. Ichi chimiro hachisi chega chinoita kuti sirivheri fiber ichengetedze iyo yepakutanga machira chivakwa, asi zvakare inopa zvese iro mashiripiti basa, mhedzisiro yesirivheri. Sechinhu chakasikwa chaizvo, sirivheri ine hutano zvachose, zvakatipoteredza / girini uye kuchengetedza.
Main Feature: Yakanyanya kudzika kuramba, inodzivirira magetsi emagetsi, anti-radiation, antibacterial, deodorant (ramba), kubvisa magetsi emagetsi, inosimudzira mhasuru, gadzirisa tembiricha yemuviri, anti-UV, girini yakasikwa, kukwirira kwemhepo, inogona kuwachika / inogadziriswazve. , yakakwirira yekudzivirira kuita.
Main Zvishandiso: Yakakwana zvinhu zvekudzivirira, anti-radiation, zvipfeko zvemukati zvakangwara, zvipfeko, zvishongedzo uye machira epamba, zvipfeko zvinorwisa mabhakitiriya, masiki, magurovhosi uye machira epamba, zvigadzirwa zvekurapa, zvemitambo, kuwana mhasuru, zvigadzirwa zvinogadzira, zvigadzirwa zvinorwisa static.
Pashure: Polyester Taffeta Paint Mhangura Inodzora Mucheka
Zvadaro: Sirivha yakaputirwa polyamide conductive / inodzivirira machira
Sirivha yakavharwa conductive / inodzivirira netting